Cudur cusub oo carruurta ku dhacaya oo caalamka ku fidaya & calaamadihiisa (Tirada dhimashada?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Cudur cusub oo carruurta ku dhacaya oo caalamka ku fidaya & calaamadihiisa...
Cudur cusub oo carruurta ku dhacaya oo caalamka ku fidaya & calaamadihiisa (Tirada dhimashada?)
(Hadalsame) 03 Maajo 2022 – Seddax carruur ah ayaa dalka Indonesia ugu dhintay cudur faafe ah oo lagu sheegay nooc cusub oo hepatitis ah, taasoo tirada ilaa haatan cudurka u dhimatay ka dhigaysa 4 qof caalamka oo idil.
Wasaaradda Caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhibanayaashu dhintay ‘looga shakiyay cagaarshow ba’an bishii hore, waxayna dhammaantood ku sugnaayeen caasimadda Jakarta.
Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah lallabbo, matag, shuban culus, qandho, cagaarshow, qallal iyo miyir beelid – waa dhammaan calaamadaha lagu garto cudur beerka ku dhaca oo dilaa ah.
Waxaa socda baaritaanno lagu xaqiijinayo waxa sababay dhimashadooda. Indonesia si rasmi ah uma diiwaan gelin wax kiisas ah cagaarshow tan iyo markii uu hepatitis-kani dillaacay.
Da’da carruurta lama shaacin mana cadda inay qabaan xaalado caafimaad oo u wehliya kuwa ay haatan sababsadeen.
In ka badan 200 oo xaaladood oo cagaarshow nooc cusub ah oo aan aan la garanayn meel ay ka yimaadeen ayaa adduunka oo dhan laga xaqiijiyey faafitaankiisa.
Inta badan kiisaska waxaa laga helay Ingiriiska oo ah dalka ugu kiisas badan oo laga helay ilaa 145 carruur ah iyo Maraykanka, kuwaas oo leh qaar ka mid ah hababka sahminta cudurrada ee ugu xooggan.
CALAAMADAHA: Kaadi dugul ah, saxaro caddays ah, jir cuncun, indhaha oo hurdi noqda, murqo xanuun, qandho, cunto xumo, daal iyo bog xanuun.
Previous articleTurkigu muxuu yeelayaa haddii uu Ruushku weeraro dal NATO ka tirsan? (mowqifkiisa oo uu caddeeyey)
Next article3 weriye oo weli iyaga oo aan nidaam cadaalad ah marin ku xiran magaalada Hargaysa (Maxaa maamulka la gudboon?)